Kooxda Newcastle Oo Dooneysa Xidiga Booska Joogtada Ka Haysan Kooxda Chelsea Ee Tomori
HomeSuuqa kala iibsigaKooxda Newcastle oo dooneysa xidiga booska joogtada ka haysan kooxda Chelsea ee Tomori
Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo daafaca dhexe ee kooxda Chelsea Fikayo Tomori.
22 jirkaan daafaca badan ayaa ku dhibtooday waqtiga ciyaarta tan iyo markii uu yimid daafaca dhexe ee reer Brazil, Thiago Silva iyo inuu raaco qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee Kurt Zouma xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay Daily Mail, Magpies ayaa ka fiirsaneysa inay amaah kula soo wareegto Tomori, si kastaba ha ahaatee kooxda Steve Bruce ayaa rajeyneysa inay tartan kala kulmaan kooxaha kale ee gudaha iyo dibada.
Weli ma cada in daafaca Ingariiska uu doorbidayo inuu sii joogo Premier League ama uu u guuro dibedda si uu uga helo waxqabad qiimo leh.
22 jirkaan ayaa iska diiday heshiis amaah ah oo maalintii ugu dambeysay uu ugu dhaqaaqi lahaa kooxda Chelsea ee London ka dhisan ee West Ham United suuqii xagaaygii hore.
Tomori ayaa ciyaaray kaliya hal kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan – isaga oo badal ku soo galay guuldaradii Liverpool – halka labadiisii ​​kulan ee kale ay labaduba yimaadeen EFL Cup.
Daafaca kale ee kooxda Chelsea Antonio Rudiger ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu ka tago Stamford Bridge si uu boos joogto ah ugu ciyaaro koox kale iyadoo kooxda ka dhisan La Liga ee Barcelona ay isha ku heyso saxiixiisa.